Abantu abaningi emhlabeni bathi isimo engajabule ibala. Izizathu zalokhu zihlukene, kodwa abantu abaningi abawubiza inkinga yabo isikhumba wacasuka ebusweni. ibala Hlanza futhi abushelelezi kungaba ozibongayo kuphela abanikazi elijabulisayo isikhumba evamile, zazo eziyivelakancane. Ukuze ezomile isikhumba hlobo nazo nobuntu izakhi ukuvuvukala, kodwa ekuthanda amanzi emzimbeni futhi ijule kudingeka umswakama njalo.
Kungani futhi kanjani ukwakha ukuvuvukala esikhumbeni?
Ukwakheka amaseli ukuvuvukala, ezifana induna, nezinduna kanye namaqhubu, ebonakala isikhumba oily futhi inhlanganisela. Lezi zinhlobo isikhumba ezithandwa uketshezi ngokweqile nezindlala sebaceous.
Cosmetologists sethule nomqondo induna ubheke inkinga isikhumba. Kube zenzo ziwukubonakaliswa eziningana induna: nezinduna, whiteheads namaqhubu.
Induna kuyinto ukuvuvukala follicle izinwele, kwakheka ngaphakathi okuqukethwe ubovu okuyinto. ebusweni isikhumba phezu avuvukele follicle elibomvu futhi avuvukele.
Induna - ivimbekile ikhule ezimbotsheni. Ukuvaleka kubo kungenxa ngokweqile sebum futhi epithelium desquamated, okuyinto ithola bese kubangele ukushisa. Eels kukhona uhlobo uhlevane elimhlophe esikhumbeni.
Comedones - uhlobo induna ukuthi nakho ezimbotsheni plugs sebaceous futhi zivela njengoba amachashazi amnyama.
Ngokuvamile futhi exutshwe izinhlobo induna, esibonakala by amaseli ahlukene ukuvuvukala.
Ngokuvamile, ukuvuvukala isikhumba okubangelwa umsebenzi kumiswa nezilwanyana ezincane Propionibacterium Acnes futhi Staphylococcus Epidermidis, ayizidleke okuyinto epithelium desquamated futhi sebum. Ngakho-ke, ukwelashwa induna, eqinisweni, kusho yokwelapha ngemithi elwa namagciwane kanye umsebenzi ukuncipha nezindlala sebaceous. Muva nje, indlela eyayithandwa kakhulu ukuxazulula inkinga induna ukulungiswa "Baziron Somlomo". Izibuyekezo dermatologists ngakho uhlamvu ikakhulu omuhle futhi odokotela abaningi batusa ukuthi yezokwelapha izidakamizwa ekwelapheni inkinga isikhumba. Iseluleko esinjalo odokotela kufanele aphathwe ngokucophelela njengoba udokotela akanalo nje ulwazi lo mshini wezenzo zomuthi, kodwa futhi unalo isipiliyoni emitholampilo elisetshenziswa iziguli. "Baziron NJENGOBA ijeli", yokusetshenziswa, ukubuyekezwa, izincazelo lapho uzothola kulesi sihloko, uzobe baziswa nabantu abangasithandi amahlebezi ukwazi izinkinga zesikhumba.
Siyini "Baziron AC"?
Gel "Baziron AC" akhiqizwa yinkampani French eyenza imithi Galderma. Kukhona izinhlobo ezintathu ezahlukene womshini ijeli, okuyinto ihluke nomunye by lokuhlushwa ingxenye esebenzayo eyinhloko. Gel "Baziron AU" ikhishwe amafomu alandelayo:
"Baziron NJENGOBA" ijeli 2.5%.
"Baziron NJENGOBA" ijeli 5.0%.
"Baziron AC" 10.0% ijeli.
Mayelana kwalokho, lokho ukulungiselela idinga isiguli esithile, onguchwepheshe yezokwelapha enquma, ngokusebenzisa uchungechunge ukuhlolwa laboratory. Yenza isinqumo mayelana ukuthenga izidakamizwa wedwa igcwele nemiphumela ebuhlungu: ukweqisa izidakamizwa, nokungezwani komzimba nezinto kanye contact dermatitis, ngemiphumela okwakuyoholela ukususa Adalberto isikhathi eside.
The main ingxenye esebenzayo ye ijeli mbewu ekhethekile - peroxide benzoyl at lokuhlushwa ukuthi kuncike zinhlobo zomuthi. Ngaphandle nje kokuthi Isakhi esiyinhloko ijeli kuhlanganisiwe eziyinkimbinkimbi "glycerol - copolymer acrylate", okuyinto inomsebenzi we adsorption ka sebum. Ebugqilini eziyinkimbinkimbi, uyasondla glycerin futhi moisturizes isikhumba.
Isenzo kwemithi zomuthi
Kusukela izidakamizwa isetshenziswa ihlelwe ngokulandelana kwezihloko, akudingekile ukuba sibonise indlela yokuphuma emzimbeni. Ekujuleni isikhumba, peroxide Gcoba i-Benzyl uguqulwa by ukuguqulwa amakhemikhali ukuze benzoic acid. Le ngxube inomphumela omuhle ezijulile kuveza nomphumela oqabulayo ezingqimbeni ezijulile kwesikhumba. Khona-ke acid ingena egazini izinso kanye excreted kusukela umzimba zinjalo. zokwelapha negates umphumela ekuqongeleleni benzoic acid esikhumbeni noma egazini iziguli abasebenzisa "Baziron NJENGOBA" impela isikhathi eside. Gel "Baziron NJENGOBA" dermatologists izibuyekezo ukuqinisekisa ukusebenza yayo ekulweni induna, namaqhubu futhi comedones, has a spectrum ezibanzi yesenzo zokwelapha. It wenza imisebenzi elandelayo:
Kuthuthukisa kwegazi ezicutshini futhi ngenxa yalokho, saturation izakhi kanye nowe-oxygen kwesikhumba. Lokhu kwenza izidakamizwa ekwelapheni izilonda emithambo yegazi, kubangelwa ahlukahlukene zokugula semithambo.
Uthuthukisa ukuphulukisa ngokushesha Izilonda, kususa izibazi ngemva induna.
It kunomphumela enamandla eqeda ukuvuvukala.
Kunciphisa umsebenzi secretory we nezindlala sebaceous.
It ubamba sebum okweqile.
It has a olubucayi amafutha senzo.
Has a liphinyiselwe umsebenzi elwa namagciwane, ke aqede izakhi ezikhona ukuvuvukala esikhumbeni futhi akubonakali entsha.
It has a exfoliating nomphumela omuhle, eqothula epidermis amaseli efile.
Ngakho, lesi sidakamizwa has a action kubasekeli. Engena phakathi kwesikhumba, ubulala amabhaktheriya ezibangela ukuvuvukala. "Baziron NJENGOBA" aqede indawo evumayo ukuthuthukiswa amagciwane: asebenzayo epithelium exfoliated futhi inomthelela inombolo kanye nokwakheka sebum. Umuthi kunciphisa asidi fat amaphakathi, ukunciphisa okuqukethwe kwayo amafutha. Insimbi ngokwayo encishisiwe ngobukhulu, futhi umsebenzi wayo secretory incipha.
Gel ehlanganisa izakhiwo eqeda ukuvuvukala kanye antioxidant, okuyinto isikhathi eside intsha kwesikhumba. Kuyaphawuleka ukuthi izilokazane ezincane abakwazi ukuthuthukisa nokuvikeleka ukuze benzoic acid, futhi ukuluthwa izidakamizwa ayenzeki. Lokhu kwenza ijeli "Baziron AC" (libuyekeza dermatologists uqinisekise leli qiniso) siyasebenza ikakhulukazi hhayi kuphela ekwelapheni ukubonakaliswa kwangaphandle induna, kodwa futhi ukuqedwa izimbangela yalesi sifo.
Gel "Baziron NJENGOBA" kumele zisakazwa inetha yomiswa Ubuso ungqimba ezondile ukuvuvukala ngokunyakaza isiyingi kuze ugxile. Isicelo se-ijeli senziwa kanye noma izikhathi eziningana ngosuku, kuye ngokuthi yinkimbinkimbi lesion kanye izincomo wesikhumba. Ungakwazi geza usebenzisa izindlela zabo evamile. Awukwazi silisebenzise ezindaweni ezithintekile kwesikhumba.
Esivulekile ukusebenzisa ijeli akudingekile, njengoba lokhu kuzokwenza isikhumba ukucasuka kanye ukulunywa. Futhi ngesikhathi isicelo ijeli kumele ukunciphisa ukuchayeka ekukhanyeni ultraviolet endaweni ngayo. Kufanele babe yingxenye uchungechunge imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba lotions oludakayo, okhilimu kanye nemithi nge salicylic futhi izithelo acid. Ukwabelana "Baziron AC" futhi salicylic acid is hhayi Kunconywa. Ijeli kunomphumela omiswe, okungase babhebhethekisa salicylic acid. Lokhu kuyoholela ekuthuleni amanzi emzimbeni futhi isikhumba uyaxebuka. Kuyaphawuleka ukuthi abanye abaye balibiza ngokuthi ijeli "Baziron NJENGOBA" amafutha, kodwa lokhu akulona iqiniso. Wamafutha "Baziron AU 'is hhayi kukhiqizwa, akhishwe ijeli nge ezintathu ukwahlukahlukana lokuhlushwa izidakamizwa esebenzayo.
Inkambo yokwelashwa nale izidakamizwa 1 inyanga. Kwaba ngemva kwalesi sikhathi kuba nomphumela esiphezulu "Baziron AC" we ijeli, ukusetshenziswa okuyinto akugcini lapho. Odokotela batusa ukusetshenziswa kwezimali ukuqhubeka naye kungathi izinyanga ezintathu ukuze uvikele umphumela etholwe. Nquma ukuthi ukuphindaphindeka ukwelashwa ngalo muthi kuthatha udokotela kuphela.
"Baziron AC" singasebenza njengendlela yokukwenza ephelele noma ngaphezu ukwelashwa olunzulu ezimweni ezinzima. Ngokuvamile ukwelashwa eziyinkimbinkimbi yakhiwa ekuphathweni temlomo izidakamizwa (amaphilisi noma hormone) kanye nokwelashwa wendawo "Baziron AC 'noma izindlela ehlanganisa retinoids.
Isexwayiso e ukusetshenziswa "Baziron AC"
Kufanele uyeke ukwamukela "Baziron AC" zomuthi ngokushesha, ukusetshenziswa okuyinto wabangela ububomvu, ukulunywa nokungezwani komzimba. Kufanele uxhumane nodokotela wakho ukuqokwa yokwelapha ezifanele. Uma umkhiqizo ingena emehlweni noma umlomo, ngokushesha ugeza indawo abathintekayo ngokuba namanzi amaningi. Ukweqisa izidakamizwa zomuthi kungaba ephula izincomo ukusetshenziselwa, ie uma isicelo ungqimba obukhulu kakhulu gel isikhumba.
Izimo ukusetshenziswa imishini kwezokwelapha:
Izingane ezineminyaka engu-12;
komzimba kanye nokungabekezelelani kunoma yezingxenye ngazinye ijeli;
Nokukhulelwa kanye lactation.
Imiphumela engemihle evela ukusetshenziswa ijeli ivelakancane. Kodwa kukhona izimo ukoma futhi flaking kwesikhumba, ububomvu kanye ukulunywa. Kulokhu, lesi sidakamizwa wamiswa ukufuna usizo lodokotela ukuze umuntu onekhono.
Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe izidakamizwa "Baziron AC"
Ngokuqinisekile, abaningi abanesifiso umbuzo, kungakanani "Baziron AC"? Ngokwazi itholakala umthengi? Gel "Baziron izipikha", ogama value incike lokuhlushwa izidakamizwa esebenzayo khona ekulungiseleleni, kanye nenqubomgomo ngabanye ekhemisi, ayibizi kakhulu. Ngokwesilinganiso eRussia "AC Baziron, 5%" ayelingana 500-700 ruble; "Baziron AC, 10%" ayelingana 700-800 ruble. Phendula lo mbuzo, kungakanani "Baziron NJENGOBA, 2.5%" ayikwazi ukutholwa, ngoba okwamanje ensimini ka iRussia hhayi amazwe.
Kungenzeka yini kube nokuthile okuzothatha indawo ijeli "Baziron AC"? Analogue ezishibhile futhi kuyabiza kakhulu etholakala Pharmacy. Engeziwe analogs ijeli "Baziron AC" kukhona omqondofana akhona amalungiselelo equkethe njengelisebenzayo izidakamizwa benzoyl peroxide, futhi amalungiselelo kokuba nomphumela ofanayo yenziwe ngohlobo oluhlukile ngokuphelele. Ngu izidakamizwa lahlotshaniswa zihlanganisa:
"AU Benzak 2.5%."
Konke lokhu izidakamizwa kuphumelela kakhulu, kodwa ephakeme kunaleyo intengo "Baziron AU" izikhathi eziningana. Ezinye izidakamizwa-bomcondvofana kanye analogue babe kusebenta ezinhle futhi kancane kunezindleko "Baziron Somlomo". Analogs, ushibhile izindleko, angathengwa kalula ekhemisi. Phakathi kwabo:
Lotion "Ugresol" (mayelana 140-170 deda.).
"Zener" (350-480 deda.).
"Proderm" noma "Uroderm" (120-140 ruble).
Zonke lezi izidakamizwa babhekene kahle yisihlungu. Kodwa iningi namanje bakhetha ukusebenzisa "Baziron NJENGOBA", ngaleso izindleko nangaphezulu, kodwa umphumela isicelo ngcono kakhulu.
Ukulinganiswa kwe- "Baziron AC"
Abantu abaningi bazizwa njengaye emibonweni yabo mayelana nokusetshenziswa lokhu izidakamizwa. Ngokuvamile, uyakwazi ukuthola lezi imibono bencoma: "Oh! Gel ekwelapheni induna Galderma «Baziron AC" - kungcono ibhomu, "Futhi hhayi ngaphandle isizathu !. Abantu ababeka "Baziron NJENGOBA" wabasiza ngempela, wazi ukuthi izinduna uqale zinyamalale kusukela ezinsukwini zokuqala kakhulu kwesicelo. Futhi inikeza izibonelo zendlela izidakamizwa kunciphisa oiliness, kususa namaqhubu, kwenza isikhumba bushelelezi, ukubonakala kakhudlwana ngisho. Abaningi ukwabelana isipiliyoni ukuthi ngemva konyaka egcwele isicelo "Baziron NJENGOBA" Inkinga induna kangcono hhayi awabakhathazi. Kufanele kuqashelwe ukuthi zonke izibuyekezo omuhle ibhalwe e abantu ngokuqinile landela imiyalelo ukusetshenziswa futhi sisebenzisa iseluleko sakhe udokotela emva ukuxilongwa okujuli-.
Kukhona futhi Izibuyekezo engakhi "Baziron AC", phakathi okuyizinto izibonelo njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, wesabeka kuwo izidakamizwa noma ukwehluleka kwayo okugcwele. komzimba abasakwazi kungenzeka futhi lokhu kuvimbela nomkhiqizi izidakamizwa. Benzoyl peroxide - into kuyinto okhuthele, futhi abanye abantu kufanele ke ukungabekezelelani ngabanye. Kulezi zimo, yebo, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kufanele simiswe ngokushesha futhi emva kokwelashwa lingaze bonana nodokotela wakho mayelana nokusetshenziswa idivayisi wezokwelapha kanye nomphumela ofanayo. Kungcono ukwenza kwangaphambilini yokungezwani komzimba ukuhlolwa, okuzokwenza ukunikeza umbono ocacile ukuthi kukhona yokusabela kuya into noma cha. Lokhu kuyokwenza ugcine engezwani ezinzima kanye nokwelashwa yesikhathi eside nemiphumela yaso. Ngokuvamile, ngemva ukuqokwa Isikali ezimele futhi zomuthi uqobo, "Baziron AC" (gel) ebangela feedback negative. Ukwelashwa uyoqoka udokotela.
Nokungasebenzi ngendlela "Baziron NJENGOBA" kunoma isiphi isimo esithile kungadalwa yizinto eziningana:
okuhlushwa engavumelekile ekhethiwe efana okusebenzayo nokulungiselela. Ezimweni ikakhulukazi eziphambili induna izidakamizwa "Baziron NJENGOBA 2.5%" akukwazi asebenzayo. Kulokhu, udinga ukwabelana imibono yakho nodokotela wakho. Yena angaqoka ukulungiselela lapho ingxenye esebenzayo angaphezulu ngenhla. Endabeni izicelo iyasilela singasetshenziswa eyabelwe analogu "Baziron AC" nomunye ejenti asebenzayo, kodwa izimo ezinjalo azibona ezivamile.
Imbangela induna namaqhubu akuyona ngenxa umsebenzi nezilwanyana ezincane. Ngempela, induna kanye induna kungase kubangelwe umsebenzi amagciwane. Isizathu kungase abacathama khona ukuvuvukala emzimbeni, kanye nezifo ezingamahlala khona yokusetshenziswa pheshana emathunjini, uhlelo endocrine, izinso kanye nezinye. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, "Baziron NJENGOBA" induna ngeke kusize. Idinga ukwelashwa eziyinkimbinkimbi, okuyinto ubeka udokotela walo iphrofayili isiguli.
Ezicashile usebenzisa izidakamizwa
Ngemva kokufunda Izibuyekezo mayelana "Baziron NJENGOBA" umuntu angenza: usebenzisa lokhu izidakamizwa, ungakwazi sifinyelele nomphumela emangalisa, kuyilapho nawe ungalushayi ilimaza impilo yabo. Kufanele kuthathe kuphela ku-akhawunti ezinye ubuqili usebenzisa "Baziron NJENGOBA" izidakamizwa:
Sebenzisa umkhiqizo kangcono endaweni at izakhi ukuvuvukala. Uma degree of Izilonda likhulu, ijeli sisetshenziswa sonke ubuso nge ungqimba elincanyana.
Kukhona futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo isikhumba yokusabela kuya izidakamizwa: ezinye ubonisa izimfanelo zayo ezinhle ngemva kwezinsuku ezimbalwa kwesicelo, abanye - obulandela isigaba asebenzayo obsypaniya ubuso, kulandele umphumela. Lolu hlobo impendulo umzimba ukuze benzoic acid.
Akubalulekile ukufezekisa ungqimba obukhulu. Lokhu kungababangela dermatitis. Ngaphezu kwalokho, ukhilimu asebenzayo ukuze ungqimba ngokwanele mncane.
Uma usebenzisa "Baziron AC" Kunconywa ukusebenzisa ukhilimu nge panthenol, okuyinto kunomphumela amafutha esikhunjeni.
Ukuchayeka ilanga ngesikhathi isicelo ijeli Akwamukelekile ngoba kuholela isikhumba uyaxebuka. Ngemuva kwesicelo, zama bazivikele elangeni nge ukhilimu efanelekayo nge lemifanekiso izibuko kanye nezigqoko (isambulela).
Ngokuhamba ukwelashwa izidakamizwa ukhohlwe utshwala lotions, okhilimu kanye peels izithelo acid, salicylic acid kanye reagents like.
Ngokulandela lezi zincomo, uzokwazi ukuba siqonde ijeli "Baziron NJENGOBA" dermatologists izibuyekezo ukuqinisekisa ukusebenza yayo ekulweni ukungapheleli isikhumba.
"Buscopan" kulokho kusiza? "Buscopan": imfundo, ukubuyekezwa
Indlela ukukhetha processor amageyimu: AMD noma Intel? Best udlala processor
Iphutha Inthanethi Iphutha uxhumano: yini okufanele uyenze futhi kanjani inkinga izindlela ezilula?